Faahfaahinta dabkii suuqa Barakaaraha | Baydhabo Online
Faahfaahinta dabkii suuqa Barakaaraha
Wararka u dambeeyay oo aan ka heleyno suuqa Bakaaraha ayaa sheegaya in dabkii saaka waaberigii hore qabsaday qeybo kamid ah suuqaas uu wali sii hurayo, waxaana bakhtinta dabkaas ku howlan gaadiidka dab-damiska ee gobolka Banaadir iyo kuwo kale.
Suuqa Khaliifa oo aheyd meeshii markii hore uu dabka kacay ayaa mid kamid ah ganacsatada ku sugan suuqa Bakaaraha waxaa uu Radio Muqdisho u sheegay in gebi ahaanba suuqaas uu baabi’iyay dabka isla markaana hada lagu howlan yahay sidii aanu u gaari laheyd qeybaha kale ee suuqa weyn ee Bakaaraha.
Ilaa iyo hadda lama soo warinin wax khasaare nafeed oo dabkan ka dhashay, hase ahaatee hanti aad u badan ayaa ku basbeeshay, iyadoo dad badan oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo hantidooda tiilay suuqa dabka uu baabi’iyay ay ku cerytoobeen musiibada ka dhacday suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Wariyaheena Cali Axmed Sheekh oo kamid ah warfidiyeenada suuqa Bakaaraha gaaray ayaa soo sheegaya in meelaha uu dabka baabi’iyay ay kamid tahay; qeybaha lagu iibiyo maacuunta, bacaadlaha dharka, suuqa safirka lacagaha qalaad iyo qeybo kale.
Dadweyne oo aad u badan isla markaana ka kala yimid xaafadaha ku dhow dhow suuqa Bakaaraha ayaa gaaray suuqa, kuwaas oo qeyb ka qaadanaya badbaadinta alaabaha yaala meelaha uusan wali dabku gaarin oo laga cabsi qabo in uu ku soo fido.
Wariye Cali Axmed, ayaa sidoo kale sheegay in ku dhowaad 20 gaadiidka dab-damiska ah ay ku howlan yihiin bakhtinta dabka isla markaana inta badan ay ku guuleysteen in aty xakameeyaan dabka.
Ilaa iyo hadda ma cada sababta dhalisay dabkan khasaaraha badan geystay ee xalay goor dambe ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha.